Filmulator: inonakidza kwazvo mbishi pikicha mupepeti (RAW) | Linux Vakapindwa muropa
Vadivelu Comedy Filmulator Iyo yemahara uye yakavhurwa sosi software iyo iwe yaunofanirwa kuziva nezvayo. Iyo yakapusa mbichana mufananidzo mupepeti (RAW) iyo inogona kukubatsira iwe nerudzi urwu rwechifananidzo. Uye haisi iyo chaiyo cinematic mhedzisiro firita iyo iwe yaunogona kuwana inoitwa mune mamwe maapplication. Iwe haungoteedzera zvekunze maficha, unogona kusvika kumudzi wemuvhi.
Vadivelu Comedy Filmulator inomiririra iyo yekuvandudza nzira yekutora mifananidzo firimukubva pakuburitswa kwemufirimu, kubudikidza nekukura kwemakristari esirivha mukati memamwe mapikisheni, kusvika pakuparadzirwa kwemugadziri, zvese zviri pakati pemapikisheni akavakidzana uye mukugadziri mukuru mutangi. Zviripachena, zvese izvo nezve dhijitari data ...
Muchiitiko chekuti iwe hauzive, iyo RAW fomati fomati, kana mbishi, iri dhijitari fomati iyo iine yese yemifananidzo data sekutorwa kwayakaitwa nekamera. Izvi zvinozvisiyanisa kubva kune mamwe mafomati panorasika mhando iyi yedhata, senge JPEG, PNG, nezvimwe. Iwe unenge uine mufananidzo sezvawakatorwa neiyo digital kamera sensor, iyo ine mikana yakawanda kune nyanzvi uye avo vanotsvaga zvakanyanya zvakadzama kugadzirisa.
Filmulator isoftware iyo inopa akasiyana mabhenefiti pamberi pevamwe. Zvimwe zvinonyanya kuzivikanwa ndezvi:
Matunhu makuru anopenya anogona kusviba, kumanikidza kuburitsa zvine simba
Matunhu madiki akajeka anosvibisa nharaunda yako, nokudaro achivandudza musiyano wenzvimbo.
Munzvimbo dzakajeka, kuzadza kunowedzera, izvo zvinobatsira kuchengetedza ruvara mumatenga ebhuruu, akareruka matoni eganda, uye kunyura kwezuva.
Munzvimbo dzakazara zvakanyanya, kupenya kunodzikiswa, zvichibatsira kuchengetedza ruzivo, semuenzaniso, muzvinhu zvakaita semaruva.
Kana iwe uchida izvi zvese, unogona kuzviedza izvozvi. Inowanikwa se AppImage package, saka unogona kuisa Filmulator pane chero distro nenzira yakapusa. Ingo dhawunirodha iyo faira, ipa mvumo yekuuraya, uye unomhanya nekukanya kaviri. Izvo zvinokwana kuti iwe utange kushandisa Filmulator.
Mamwe ruzivo nekutora - Filmulator Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Filmulator: inonakidza kwazvo mbishi mufananidzo mupepeti (RAW)